Shiinaha Wajiga Rullaluistemadka Massage-02 Soo-saar iyo Warshad | Wangtong
Baaskiil casaan ah wuxuu badiyaa kobciyaa wadnaha chakra, wuxuu xoojiyaa wadnaha iyo shaqada sanbabada. waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta xiriirka shakhsi ahaaneed iyo kobcinta xiriirka shakhsiyeed iyo ganacsi.
Waxyaabaha wax lagu nadiifiyo ee jaadku waxay ka caawiyaan maqaarka inuu ilaaliyo firfircoonida, sidaas awgeedna lagu gaaro saameynta ciribtirka duuduubnaanta, iska caabinta gabowga, wajiga oo khafiifiya, adkeeya.
Rullaluistemadka noocan ah waxay qallajinayaan qanjirada muruqyada ee aagga wajiga ka dib markay wada shaqeeyaan duugista, ka dhig maqaarku inuu si adag u ilaaliyo. Duugista ka sokow, daryeelka maqaarku sidoo kale wuxuu adeegsan karaa duub si uu u dardar galiyo nuugista, markii aad baxdo waxay qaadan kartaa kaabsulka nuxurka, iyadoo duugista duugista ay ku jirto nuxurka.
Doorka ugu weyn ee gawaarida jaadku waa in la dhiirrigeliyo wareegga dhiigga wajiga, duugista nidaamka qaaxada, caawinta dheef-shiid kiimikaadka, sidoo kale waxay yareyn kartaa bararka, hagaajinta nasashada maqaarka.
Marka khilaafaadka maqaarku uu kor u qaadi doono wareegga qanjirada maqaarka, si uu uga caawiyo maqaarka inuu gaaro natiijada wejiga khafiifka ah.
Tilmaamaha: Kahor dayactirka, samee shaqo fiican oo ah nadiifinta geesaha.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa biyo diirran si aad u qoyso, iyada oo loo marayo kuleylka kuleylka ee jaadka, xoojinta wareegga dhiigga. Qalabka dayactirka qeybaha ayaa isticmaala, sidoo kale waxay noqon kartaa mid si fiican u nuugista alaabada dayactirka.
Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay loox xoqan oo isbarbar dhigeysa, marka lagu daro duugista wajiga, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida xoqitaanka gacanta, waxay leedahay saameynta nadiifinta sunta diiran. hooyada maalka.
Tani waa badeecad heer sare ah, haddii ay tahay ardayda, shaqaalaha xafiiska, ama hooyada khasnadda, aad ayey ugu habboon yihiin.
Isticmaalka rullaluistemadka jaad, waxaanan u adeegsanaa qalab kale oo qurux badan waa isku mid, ka hor intaan la isticmaalin isticmaalka ugu horreeya ee kareemka duugista ama waxyaabaha saliidda lagu duugo ee maqaarka ah, yaree jiidista maqaarka.
Marka xigta ka bilow meesha cirifka, hoosta ilaa kor, si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaq garka iyo qoorta, sida ku xusan amarka buundada sanka, dibnaha, dhabannada, foodda, ugu dambaynna xooji furaha isha.
Markaad duugayso, jihada rogista waa inay sidoo kale ilaalisaa jihada kore iyo dibedda, wejiga ujiji si looga fogaado hoos u jiidista si loo soo saaro khadad ganaax ah.
Gudiga xoqida ee Jade ayaa kaa caawin kara inaad yeelato waji khafiif ah.
Wayna fududahay in la qaado, wakhti kasta iyo meelwalba waa la isticmaali karaa, fadhiisid waqti dheer ayaa banaanka loo soo saari karaa si loogu qoro qoorta iyo garabka, loo nasto jirka iyo maskaxda, ha laguu daayo inaad ku raaxeysato raaxeysiga jirka iyo maskaxda
Xiga: Waji duubista Wajiga